Indlela yokwenza isisigxina ngokusisigxina?
Namhlanje, iindlela zokuphikelela ziyafumaneka kuwo onke amabhinqa. Awunakuxhalabisa malunga nokuzenzela - kuya kuhlala ixesha elide kuthatha. Iimarike zanamhlanje zinika iimveliso zokungcola ezingenawo amanzi kunye nezityalo ezinqandekayo. Iimali ezikwinqanaba lokuqala zikwahluke kwizinga eliphezulu lokuchasana nokunyanyiswa. Zikulungele ukusebenzisa ngaphambi kokuya echibini okanye kusebe lolwandle. Izithambiso ezinganyangekiyo zokuthuthwa komthunzi, zincinci kwaye zifanelekile ukuzenzela ngexesha lokuvula.
Iiprogram ze-makeup eqhubekayo
Iziqholo ezinjalo ixesha elide aligcini, azigqoki, kwaye akuyi kudingeke ukuba uhlale uchukumisa umlomo wakho okanye ipowder yakho impumlo.
Isiseko esisisigxina se-tonal sibonakaliswe ngumphumo wokuqinisa.
Ezi zimonyo zikhusela ulusu kwimiphumo emibi yendalo.
Umxhelo wee-makeup eziqhubekayo
Ukubumba okuqhubekayo kunempembelelo ebusweni ebusweni.
Ukunyamekela kweemveliso zonyango kunikezwa ngephanyazana ebonayo, ngenxa yokuba ubuso abuphefumli, obangela ukuveliswa kweemvakalelo kunye nemibimbi.
Umlomo oqhubekayo unako ukomisa nokumisa umlomo.
Ngokuqinisekileyo, abavelisi banamhlanje baphucula umgaqo wokuzibamba okuqhubekayo. U-Stalyvypuskatsya "ukuphefumla" isiseko kunye neengcingo ezithintekayo. Nangona kunjalo, ezi zixhobo akufanele zisetyenziswe imihla ngemihla. Kuye kwenzeka ukuba ama-agent angapheliyo asebenzayo kwaye asebenzayo, kodwa asetyenziswa kangcono kwiimeko ezizodwa.
Xa ukhetha isidumbu, umquba womlomo okanye i-cream ephethe uphawu "olungenawo amanzi", kubalulekile ukubhala ingqalelo kubume bezondlo, kunye ne-sunscreen.
Xa sisebenzisa ama-agent e-cosmetic angenawo amanzi, sincoma ukuba uhambisane nemithetho ethile:
Ukuba unoluhlobo lwesikhumba oluqhelekileyo, ngoko phantsi kwesiseko esomeleleyo, akufanele usebenzise ukhilimu, kuba ithoni inokuthi ifakwe kwaye ifakwe.
Ngomhlobo owomileyo wesikhumba, i-tonal cream eqhubekayo ibangela ukuba ungeva. Ukukhusela oku kungenzeki, gcoba ubuso bakho kuqala.
Ukuba unesikhumba esinamafutha, ngaphambi kokuba usebenzise isiseko esiqhubekayo, uhlambulule ubuso bakho kwaye usebenzise ukhilimu onomsoco onokukwazi ukulawula ukukhutshwa kweengqungqungquthela zokugcoba.
Faka isicelo se-mascara esiphezulu semigangatho emininzi. Musa ukulibala ukuba isakhiwo se-carcass esinyanzeleka kwamanzi sinzima kwaye sininzi, ngenxa yoko ukugqithisa okungaphezulu kunokuba yi-mass mass. Kwaye ekubeni i-mascara enempahla ifanele ichithwe ngamafutha, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba akukho kratri engaphezulu kwamehlo.
Akukhuthazwa ukusebenzisa i-lip balm ngesimo se-lipstick.
Faka isicelo se-lipstick ngoncedo lwebrashi ekhethekileyo, kunye nokusebenzisa isicwecwe kwi-lipstick, bhetele ukuphepha.
Ukuba awunomdla ngokufakela kwesidumbu sembonakalo yamanzi, ngoko sincoma ukuba endaweni yokusebenzisa ukukhushulwa kwe-eyelashes, echazwe namhlanje ngabafundi bezityalo. Oku kuthetha ukuba umbala obala ungasetyenziswa kumascara wakho ozithandayo. Ngokuqinisekileyo, ukuzenzela kubonakala kubumnene, kodwa kulula.
Emva kokusebenzisa umlomo oqhubekayo, musa ukuvala imilomo yakho isikhashana ukuvumela ifilimu ekhuselekileyo ukuba ifake.
Ukufumana iziqhumiso zokuzibambisa ezingabandekanga, kubalulekile ukuthenga kunye nendlela yokususa le makeup. Ukulungelelanisa abathengi bayo, uphawu, olwenza iziqholo eziqhubekayo, lunoluhlu lweemveliso.
Ubisi oluqhelekileyo lokuhlamba i-orgel alinamandla kulo mzekelo, kuba ukuzenzeka okuqhubekayo kudinga ukuhlamba okukhethekileyo.
Kubalulekile ukwazi ukuba iindlela zokususa i-aggressive makeup ziqukethe utywala. Ukucima ngokupheleleyo isikhumba, kodwa ungadluli - isikhumba esikhatywayo sisolula lula. Emva kokuba ubuso buyi-budetochileno, ungalibali ukusebenzisa ukhilimu otyayo okanye ophuculisayo ukuphelisa iziphumo zoxinzelelo. Ekuseni, kufuneka usule ubuso bakho ngokuthobisa.
Thatha iingcebiso zethu kwaye uhlale uhle!
Ingqungquthela eyenziwe ngumlando: i-pigment Phantom 002 evela ePat McGrath
Indlela yokwenza i-Makeup Barbie Doll
Indlela yokuhlamba umbala obomvu obomvu
Njani kunye nendawo yokufunda isiNgesi?
Ndingayibonisa njani induduzo yokufa?
Indlela yokunxibelelana nabantwana
Ubani ubuhle bokwenene bomntu?